Khariidad Suuq Digital ah oo loogu talagalay 2014
Mararka qaarkood way fududahay in la raaco kaliya xariiqda dhibcaha maadaama aad raadineyso inaad hubiso in suuq-geyntaada dijital ahi ay isku dheelitiran tahay oo dhameystiran tahay. Tani infographic, bogaadin ee Laba sharciyeysan, ujeedadiisu tahay in sidaas la sameeyo. Kugu dhex soconaayo a khariidadda suuqgeynta joogitaankaaga shabakada, mobilada, e-meheradda, dibedda, dibedda, soo-gelinta, waxyaabaha ku jira iyo dadaallada suuqgeynta ee warbaahinta bulshada.
Hal cunsur oo ku lumay xogtani waa awoodda dhammaan xeeladaha ay ku wada shaqeeyaan midba midka kale. Tusaale ahaan, ka faa'iideysiga suuqgeyntaada macluumaadka ku saabsan joornaalada awooda ee loogu talagalay qalabka mobilada. Taasi laguma qeexin faahfaahintaas laakiin waa lagama maarmaan buuxda haddii aad jeclaan lahayd inaad si buuxda uga faa'iideysato emaylka oo aad u hubiso in emaylladaada si habboon loo akhriyo. Hore ayaan u qoray tan casriga ah lataliyaha warbaahinta dhijitaalka ahi waa kaariye, dheellitirka mugga istiraatiijiyad kasta si loo sameeyo xoogaa macaan, muusig macaan!
Inta badan maahan, waxaan ogaannaa in furaha suuqgeynta sifiican uusan usameyneynin wax walba… waxay dheelitireysaa istiraatiijiyado isku dhafan, kordhinta saameynta iyaga oo wada shaqeynaya, iyo fahanka inta istiraatiijiyad kasto ee bilaabeysa si loo kordhiyo natiijooyinka. Taasi waxay tiri - tani wali waa liis aad u fiican oo aad ku dhaadhacdo oo aad hubiso inaadan waxba ka maqnayn! Infograafigani wuxuu kaloo bixiyaa tirakoobyo ka dambeeya isbeddellada suuqgeynta dhijitaalka ah.
Khariidadda Suuqgeynta Digital 2014
Tags: Content Suuqecommercesoo galidkhariidadda suuqgeyntaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkabannaankawarbaahinta bulshadalaba xalaal ahjoogitaanka webka
Abaalmarinta Abaalmarinta: Ku dhiirrigeli faallooyinkaaga iyo ereyga Suuqgeynta Afka